Shiinaha warshad suufka cudbiyeedka cudbiyeed iyo alaableyda | Zhongxing
Caarada baastada ah ee cudbiga suufka ah ee caafimaadka ayaa leh hawsha nuugista biyaha; waxaa lagu bixiyaa qaab aan nadiif ahayn oo hal mar loo isticmaalo.
Suufka caafimaadka 25 xirmo
Suufiyada caafimaadka ee 2000 baakadaha
Suufyada cudbiyuhu waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
1. Madaxa suufka ee cudbida cudbiga ayaa laga sameeyay suuf wax nuugaya oo u dhigma heerka YY / T 0330, oo leh nuugid biyo oo xoog leh.
2.Suufka suufka cudbiyeedka cudbiga ayaa laga sameeyay alwaax u fiican deegaanka. Suufka suufku waa mid siman oo aan barxado lahayn, wuxuuna leeyahay faa'iidooyinka dabacsanaanta sare oo ma sahlana in la jabiyo.
Suufyada cudurada ee caafimaadka waxaa badanaa loo isticmaalaa qeybaha caafimaadka iyo caafimaadka iyo daryeelka guriga, marka la nadiifinayo oo jeermiska laga saarayo maqaarka iyo boogaha, waxaa loo isticmaalaa in lagu isticmaalo daawo.
Fur baakada oo soo bixi suufka cudbiga;
Dhex mari caarada suufka ee wakiilka jeermiska dila ama nadiifinta oo ku dhex gal dheji ama wakiilka nadiifinta;
Masax madaxa suufka suufka lagu rusheeyey devenom ama saabuunta saabuunta ee aagga u baahan in jeermiska lagu dilo ama la nadiifiyo.
Magaca badeecada Suufka caafimaadka
Waxyaabaha cudbi nuugista, baasaboorka iyo qoryaha, iwm.
Lambarka shahaadada diiwaangelinta alaabta Su Xie Zhuzhun 20172640682
Faahfaahinta baakadaha caadiga ah Baakadaha PE, 25 kumbiyuutar / bac
Hore: Suufka kalkaalinta caafimaad
Xiga: Cudbi aan dufan lahayn
Maaskaro ka hortagga fayraska, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Maaskarada Neefsashada, Suufka Caafimaadka, Suufka jeermiska looga dilaaco, Suunka Kalkaalinta,